परम्परा Archives | Kendrabindu Nepal Online News
डा. राजेन्द्र कोजु – विचौलियाका कारण कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनहरू मारमा परेका समाचारहरू व्यापक आइरहेका छन् । साथसाथै किसानहरू आन्दोलित भइरहेका पनि छन् । तर दुर्भाग्य, कृषि प्रधान देशमा किसानहरूको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । आन्दोलनको रापताप व्यापक हुन
१० पुष २०७६, बिहीबार १२:४८	१० पुष २०७६, बिहीबार १२:४८
३० वर्ष कटिसक्यौ, बिहे कहिले गर्छौ ? धेरै पाकेपछि झरिन्छ नि ! विवाह गर्ने उमेर भइसकेको छ तर विवाह गरिएको छैन भने धेरैले यस्ता प्रश्न एवं ताना सुन्नुपरेको होला । कतिपय अवस्थामा त विवाह गर्नका लागि यति धेरै दबाव दिइन्छ
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १६:४६	१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १६:४६
हरेक मानिस स्वस्थ जीवन बाँच्न चाहन्छ । समस्त भोग भोग्न चाहन्छ अनि यसका लागि सदैव तन्दुरुस्त एवं जवान रहने भित्री चाहना सँगाल्छ । मुखले बाहिर जेसुकै भने पनि हरेक मानिस समस्त रोग, शोक एवं कष्टबाट टाढा हुन चाहन्छ । अस्पताल
२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार १४:०१	२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार १४:०१